बधाई ! १८ वर्षकी किशोरीले युएस ओपन टेनिसको उपाधि जितेर इतिहास रचिन् । - Thulo khabar
बधाई ! १८ वर्षकी किशोरीले युएस ओपन टेनिसको उपाधि जितेर इतिहास रचिन् ।
काठमाडौं : बेलायती किशोरी एम्मा राडुकानुले विश्वकै ठूलो टेनिस प्रतियोगिता युएस ओपनको उपाधि जितेर नयाँ इतिहास बनाएकी छिन् । गत महिना यो प्रतियोगिताको लागि न्यू योर्क आउँदा उनी १५० औं बरियतामा थिइन् ।
उनले त्यतिबेला एउटा मात्र ग्राण्डस्लाम खेलेकी थिइन् । तर, एक महिनापछि नै उनले ग्राण्डस्लामको उपाधि नै जितेकी हुन् ।उनी न्यूयोर्क आउँदा युएस ओपनको प्रारम्भिक छनोट चरण खेल्नका लागि आएकी थिइन् जबकि त्यतिबेला कैयौं खेलाडीहरु पहिले नै मुख्य प्रतियोगिताको लागि छनोट भइसकेका थिए ।
तर, राडुकानुले छनोट चरणदेखि लगातार प्रतियोगितामा अगाडि बढ्दै अन्ततः उपाधि नै जितेर नयाँ इतिहास बनाएकी हुन् । रोचक त के भने उनले फाइनलमा पनि किशोरीलाई नै पराजित गरेकी हुन् । फाइनलमा उनकी प्रतिस्पर्धी क्यानडाकी १९ वर्षकी किशोरी लेलाह फर्नान्डेज थिइन् ।
राडुकानुले फाइनलमा फर्नान्डेजलाई ६–४ र ६–३ को सेटमा पराजित गरेकी हुन् । यससँगै १५० औं बरियताकी उनी अब सोमबार जारी हुने नयाँ बरियतामा शीर्ष २५ भित्र पर्नेछिन् । उनले युएस ओपनको उपाधि जित्नको लागि लगातार १० खेल जितेकी थिइन् ।
यीमध्ये तीन खेल उनले छनोट चरणमा खेलेकी थिइन् र बाँकी ७ खेल उनले मुख्य प्रतियोगितामा जितेकी थिइन् । २०१४ मा सेरेना विलियम्सपछि उनी युएस ओपनमा एउटा पनि खेल नहार्ने अर्की खेलाडी बनेकी छिन् ।